HomeWararka CiyaarahaKylian Mbappe oo Gaaray go’aankii muddada laga sugayay ee mustaqbalkiisa iyo halka uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe.
May 16, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Xiddiga reer France ee Kylian Mbappe ayaa gaadhay go’aankii muddada laga sugayay ee mustaqbalkiisa iyo halka uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe.
Mbappe ayuu mustaqbalkiisu laalnaa in muddo ah, waxaana uu hore u sheegay in aanu wali go’aan ka gaadhin haddii uu sii joogayo Paris Saint-Germain iyo haddii uu ka tegayo oo uu u wareegayo kooxda reer Spain ee Real Madrid.
Laacibkan oo qandaraaskiisa Paris Saint-Germain uu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan, ayaa hadda isku diyaarinaya kulanka ugu dambeeya ee kooxdiisa PSG ay dheelayso xilli-ciyaareedkan oo toddobaadka foodda inagu soo haya lasoo gabogabaynayo.
Axaddii ayaa la guddoonsiiyey abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa PSG sannadkan, waxaanay saxaafaddu weydiisay haddii uu go’aan ka gaadhay mustaqbalkiisa, waxaanu ku jawaabay: “Haa, waan gaadhay go’aanka.”
Waxa uu laacibkani sheegay in ay dhamaatay rajadii ahayd in kooxdiisu ay raadiso ku guuleysiga Champions League oo ay waqti horeba hadhay, waxaana uu madashii abaal-marinta uga mahad-celiyey ciyaartoyda iyo tababaraha kooxdiisa oo uu sheegay inay wax walba u suurtogeliyeen.
“PSG, waxay ii suurtogelisay in aan halkan soo gaadho, way mahadsan yihiin ciyaartoyda aiyo tababaruhu” Ayuu yidhi, waxaanu sii raaciyey: “Sheekadaydu way soconaysaa, waxa aan sii wadayaa ku guuleysiga, waligayna ma noqonayo mid qanacsan, taasina way ii fiican tahay.”
Mar la weydiiyey waxa uu yahay go’aankiisu waxa uu ku gaabsaday: “Waan shaacin doonaa.”
Warbaahinta ayaa Faransiiska ayaa sheegtay, in go’aanka Kylian Mbappe uu bannaanka iman doono ka hor ciyaarta xulka qaranka Faransiiska iyo Denmark ee June 3 ee tartanka UEFA Nations League.
Kylian Mbappe ayaa afkiisa ka ilaaliyey in uu xaqiijiyo, in uu go’aankiisu yahay sii joogista PSG iyo haddii uu yahay in uu tegayo, waxaase aanu shaki ku jirin in laacibkani uu doonayo inuu u wareego Real Madrid oo uu hore uga dalbaday kooxdiisa in laga iibiyo markii ay sannadkii hore 200 milyan oo Euro kooxda reer Spain kusoo dalbatay.